कसरि फैलियो गायक लकी अलीको नि’धनको खबर ? – eSidhakura
अक्सिजन दिन छोडेर सरकारले ला’श ज’लाउनका लागि भत्ता दिन्छु भनेछ, वाह सरकार तिम्रो नियति : पल शाह
मुख्य पृष्ठसमाचारकसरि फैलियो गायक लकी अलीको नि’धनको खबर ?
कसरि फैलियो गायक लकी अलीको नि’धनको खबर ?
को’रोनाभाइरसका कारण थुप्रै मानिसहरुले आफन्त गु’माइरहेका छन् । हालै गायक लकी अलीको निधन सोसल मिडियामा मंगलबार बेलुकी अ’चानक आउन थाल्यो । प्रशंसकले लगातार लकी अलीका लागि ट्वीट गरिरहका थिए ।
ती सबैले गायकको को’भिड–१९ का कारण नि’धन भएको बताइरहेका छन् तर यसमा अलिकति पनि वास्तविकता छैन । लकी अलीको नि’धनको अ’फवाह उ’ड्ने बित्तिकै गायककी साथी न’फिसा अलीले ट्वीटरमा यसबारे वास्तविकता बताउँदै ट्वीट गरिन् ।
ला’इमलाइटबाट टाढा छन् लकी अलीः स्मरण रहोस्, गायक पछिल्लो केही समयदेखि ला’इमलाइटबाट टाढा छन् । लकी अलीको नि’धनको खबर जब सोसल मिडियामा तीब्र हुन थाल्यो तब नफिसा अलीले ट्वीट गर्दै लेखिन्, ‘लकी पूर्ण रुपमा ठिक छन् र हामीले आजै अपरान्ह कुरा गरेका छौं ।
उनी आफ्नो फार्ममा छन्, परिवारसँग । को’भिड पनि लागेको छैन, पूर्ण रुपमा स्वस्थ छन् ।’नफिसा अलीले टाइम्स अफ इन्डियासँगको कुराकानीमा आफूले लकीसँग दिनमा कम्तीमा २–३ पटक कुरा गरेको र उनी पूर्ण रुपमा स्वस्थ भएको बताएकी छिन् ।उनले भनिन्, ‘उनलाई को’भिड भएको छैन ।
उनीसँग ए’न्टीबडीज छ । उनी आफ्नो सङ्गीत र कन्सर्टको योजनामा व्य’स्त छन् । हामी दुईले भ’र्चुअल क’न्सर्टबारे कुरा पनि गरिरहेका थियौं, जुन आजकाल भइरहेका छन् । उनी बें’गलुरुमा आफ्नो फार्ममा छन् र परिवार पनि उनको साथमा छन् । मैले भर्खरै उनीसँग कुरा गरेकी छु र सबैजना स्वस्थ छन् ।’